Buy အသားဖြူ​​ဆေး Gluta over white C in ရန်ကုန် (9,000 Ks) on ipivi
အသားဖြူ​​ဆေး Gluta over white C
Gluta over white C (Made in Thailand)
သဘာဝ8ယ်​ရီသီးများနဲ့ ​ပေါင်းစပ်​ထုတ်​လုပ်​ထား​၍ GMP လက်​မှတ်​ရထား​သော ထိုင်းနိုင်​ငံ မှ ထုတ်​လုပ်​ထား​သော အသားဖြူဝင်းဆေးဖြစ်​ပါသည်​။
သဘာဝသစ်​သီးများနှင့်​ပြုလုပ်​ထားခြင်း​ကြောင့်​ ခန္ဓာကိုယ်​အတွက်​လိုအပ်​​သော ဗီတာမင်​ C ဓာတ်​ကို အပြည့်​အဝရ​​ရှိ​စေ
အရွယ်​တင်​နုပျို​စေပြီး အသားအ​ရေကိုကြည်​လင်​​စေကာ မျက်​နှာမှ ဝက်​ခြံ၊ မှဲ့​ခြောက်​ နှင့်​ ​နေ​လောင်​​သော​ကြောင့် အသား မညီညာပဲ တင်းတိတ်​ဖြစ်​ခြင်းများကို ​ပျောက်​ကင်း​စေပါသည်​။
ဖြူသူများကိုကြည်​လင်​ဝင်းပ​စေ၍ ညိုမဲသူများ ကို ဖြူလာ​စေပါမည်​။
Side effect မရှိပါ။
မနက်​စာစားပြီး (သို့) ညအိပ်​ရာမဝင်​မှီ
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၃သောင်းဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူသူများနှင့်ပစ္စည်း၅မျိုးအမျိုးတူတူမတူတူဝယ်ယူသူများအား delivery freeပါရှင့်။
BEARD GROWTH OILမျက်ခုံးမွှေးပသိုင်းမွှေးပေါက်ဆေး
PHILIPS - အမွှေးရိတ်စက် / ပုံဖော်စက်
Vitaccinoအဆီကျကော်ဖီအစစ် instock0997်
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 21ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 31 (+ 1 )
ဒေါင်းလုတ်ကို GOOGLE PLAY ဒေါင်းလုတ်ကို App store
ကျွန်ုပ်တို့ site ကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒ ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် cookies အသုံးပြုမည်ဆိုခြင်းကို လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ကြော်ငြာဖန်တီးသူသည်ရိုင်းပျသည် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ
ခိုးယူလာသည့်ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်
အမည်:အသားဖြူ​​ဆေး Gluta over white C
ဈေးနှုန်း: 9,000 Ks
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်း, ရန်ကုန်
Be careful! Don't settle for prepayment, if you are not sure of the seller's reliability Carefully check goods before pay. Do not trust too cheap offers. Read more about "လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ"
Choose your country below